E309L-16 သည် rutile အမျိုးအစားဖိအားသုံးကိရိယာများတွင်သုံးသောအလွန်နိမ့်ကာဗွန် Cr23Ni13 သံမဏိလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Cross-direct ကို all-position welding အတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သတ္တုထည့်ထားသောသတ္တုသည်ကာဗွန်ပါဝင်မှုနည်းသည်၊ ထို့ကြောင့် niobium နှင့် titanium ကဲ့သို့ stabilizer မပါဝင်သောအခါ carbide မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော inter crystalline corrosion ကိုတွန်းလှန်နိုင်သည်။
၁။ ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီ electrode ကို ၃၂၀-၃၅၀ ℃ဖြင့် ၁ နာရီခန့်ဖုတ်ရမည်။
၂။ ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီသံချေး၊ အဆီ၊ အစိုဓာတ်နှင့်အခြားအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပါ။
3. Dc power supply ကိုအကြံပြုသည်၊ လက်ရှိဂဟေဆော်ခြင်း၏အတိမ်အနက်သည်အတော်လေးတိမ်သောကြောင့်အရေပြားနီခြင်းနှင့်ကွဲအက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ လက်ရှိအလွန်ကြီးမနေသင့်ပါ။
၄။ အပူထည့်ခြင်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချပါ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏လွှဲခွင်အကျယ်သည်အလွန်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်သင့်ပါ။
၅။ အပူချိန်ကို ၁၅၀ below နှင့်အောက်ရှိချန်နယ်များအကြားအပူချိန်ကိုကြိုထားပါ။
သံထည်သတ္တုရည်အားလုံး၏ဓာတုပါဝင်မှု: (Wt ။ %)
၀.၅၀ ~ ၂.၅၀
၂၂.၀ ~ ၂၅.၀
၁၂.၀ ~ ၁၄.၀
ပစ္စည်းများ Rm (MPa) A/(%)
လိုအပ်ချက်များ ≥၅၁၀ ≥၂၅
ပုံမှန်ရလဒ်များ 560 42
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (AC သို့မဟုတ် DC+)
၄၀ ~ ၈၀
၅၀ ~ ၁၀၀
၇၀ ~ ၁၃၀
၁၀၀ ~ ၁၆၀
၁၄၀ ~ ၂၀၀
5kg/box, 4boxes/carton, 20kgs/carton, 50cartons/pallet ။ 1X20″ FCL နှုန်း 21MT -26MT
ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM/ODM ကိုပံ့ပိုးပြီးသင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီထုပ်ပိုးမှုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောဂဟေဆက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်၊ အဓိကပုံစံများမှာ AWS E6010, E6011, E6013, E7018, သံမဏိဂဟေဆော်ခြင်း၊ AWS E308-16, E308L-16, E309-16, E308L-16, E310-16, E312- သံမဏိသံဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများအတွက် PLZ အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အမျိုးအစား ၁၆ ကိုကြည့်ပါ။
A: T/T ကိုစပေါ်ငွေအဖြစ် ၃၀% နှင့်မပေးပို့မီ ၇၀% သင်ငွေလက်ကျန်မဆပ်မီထုတ်ကုန်များနှင့်အထုပ်များ၏ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါမည်။
A: ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပြီး ၂၅ ရက်မှ ၃၀ ရက်ကြာလိမ့်မည်။ တိကျသောပေးပို့ချိန်သည်ပစ္စည်းများနှင့်သင်၏မှာယူမှုပမာဏပေါ်မူတည်သည်။
Q5 သင် OEM/ODM ကိုထောက်ခံပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့က OEM/ODM ကိုထောက်ခံပြီးမင်းရဲ့ဒီဇိုင်းအတိုင်းထုပ်ပိုးနိုင်တယ်
A: အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုနှင့်စမ်းသပ်မှုအတွက်နမူနာပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်သည်။ 2kgs အတွင်းနမူနာသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သယ်ယူသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့မပို့မီ ၁၀၀% စမ်းသပ်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ISO9001: 2008 လက်မှတ်၊ အချိန်ပြည့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးသူ၊ ကျွမ်းကျင်စမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုသည်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီတင်းကျပ်သည်။
အများအားဖြင့်တစ်ဗူးတွင် ၅ ကီလိုဂရမ်၊ တစ်ပုံးလျှင် ၄ ထုပ်၊ တစ်ပုံးလျှင် ၂၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ pallet တစ်ခုတွင် 50carton၊ pallet တစ်ခုလျှင် ၁ တန်
ယခင်: နူးညံ့သောသံမဏိဂဟေဆော် Electrode AWS E7018
နောက်တစ်ခု: ဂဟေတံလှီးဖြတ်ရန်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ - ဂဟေဆော်အမှုန့်: E6013 - Tianqiao
ရေအောက် Arc Welding Flux SJ101 နှင့် Welding Wi ...
ရေအောက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သုံးသော Welding Flux ...
ဂဟေဆော်ခြင်း flux SJ302
ဂဟေဂဟေဆော်လူမီနီယံဂဟေဆော်ဝါယာကြိုး AWS ER4043
MIG TIG အစိုင်အခဲဂဟေဆက်ဝါယာကြိုး AWS ER4303 ER5356 အတွက် ...
Cast Iron Welding Electrode ဖြစ်သည်, ၁.၅ မီလီမီတာဂဟေတံ, Ss Welding Electrode ဖြစ်သည်, ဂဟေတံ, မတူညီသောဂဟေတံများ, welding လျှပ်ကူးပစ္စည်း,